Banaan bixii Maanta Jaaliyada DDSI Ee Scandinavian ka. - Cakaara News
Banaan bixii Maanta Jaaliyada DDSI Ee Scandinavian ka.
Copenhagen,(cakaaranews) sabti, 24ka, September, 2016. Waxaa ka socda guud ahaanba wadamada caalamka banaan bax balaadhan oo ay jaaliyada DDSI ee ku nool wadamadaasi ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan isku dayga ay hadhaaga nafla caaridka ah, ku doonayeen in ay ku xagal daaciyaan nidaamka federalismka iyo dastuurka dalkeena itoobiya.
Haddaba waxaa maanta galabnimadii kadhacay magaalada Copenhagen ee wadanka Denmark gaar ahaan Goobta Rådhusplads center banaan baxa ay iskugu yimaadeen jaaliyada ka soo jeeda DDSI ee ku nool wadamada Scandinavianka. Waxayna banaan baxan kaga soo horjeedaan hadhaaga taagta yar ee nabad diidka ah ee doonaya in ay soo nooleeyaan nidaamkii kalidii talisnimada ee dhargiga ee caadaystay cadaadiska, xasuuqa iyo cabudhiska qoomiyadaha kuwaasi oo ah ururada GiNBOOt7, ONAG iyo UBBO.
banaan baxan ayaa waxaa soo agaasimay hogaaminta jaaliyada DDSI ee wadamada Scandinavianka. Waxayna wateen Banaan baxayaashan boodhadh ay ku qoranyihiin erayo ay ku canbaaraynayaan kagana soo horjeedan ururadaasi. Kuwaasi oo ku dhawaaqayay ‘Ginboot7 down, Onag down iyo ubbo down.’ Taasi oo macnahoodu yahay ‘hadhacaan diciifka ah ee ginboot7, Onag iyo Ubbo ma arki karno ha dhacaan’ iyagoo dhanka kalana ay boodhadhka ugu qoraayeen islamarkaana kudhawaaqayay ereyo ay ku taageerayaan nidaamka federalismka ah ee ku dhisan rabitaanka iyo raali noqoshada qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeena itoobiya, dimoqraadiyada, sinaanta iyo cadaalada iyo waliba dastuurka JDFI ee saldhiga u ah nidaamka dimuqoraadiyada, iyo nidaanka koboca dhaqaale oo ku salaysan ninaanshaha qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeena itoobiya iyo taabagalinta danaha guud ee qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeena itoobiya iyaga oo sidoo kale ku dhawaaqayay ‘Guul XDSHSI, Guul xukuumada DDSI.
Hogaaminta jaaliyada DDSI ee wadama Scandinavianka oo la hadlayay warbaahinta afka soomaliga ku hadasha ayaa amaan, bogaadin iyo taageero balaadhan u soo jeediyay Xisbiga EPRDF ee wadanka ku hogaaminaya nidaamka federalismka ah ee ku salaysan dimoqraadiyada, sinaanta iyo cadaalada islamarkaana uu dhex-yaalo dastuurka loo wada siman yahay. Waxayna taageero buuxda u muujiyeen xukuumada DDSI ee uu majraha u hayo madaxwayne Cabdi Mxamuud Cumar.
Dhanka kale xukuumada DDSI iyo XDSHSI oo ugu horeeyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa halkan uga hambalyaynaya islamarkaana u mahadcelinaya jaaliyada DDSI ee wadanka Ingiriiska ku nool iyag oo talaabadooda kutilmaamay mid geesinimo, karti iyo ficil wadaniyadeed leh islamarkaana ku dayasho mudan.